Laukkai –asmall border town with China………… – AHRN-Myanmar
Laukkai –asmall border town with China…………
By albert wilson — In Activities	— 09/01/2020
Laukkai –asmall border town with China, situated in Kokang Self-Administrative Zone is one of the conflict affected areas of Myanmar. Asian Harm Reduction Network (AHRN) has been implementing Harm Reduction and Health Promotion services to people who inject/use drugs, their sexual partners and community since October 2007. It is already 13 years of services in the area – conflict or no conflict! Here is aboutaclient who has accessed to our DIC in Laukkai.
Funded by Access to Health Fund
ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၌တည်ရှိသော၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော နယ်စပ်မြို့ငယ်လေး လောက်ကိုင် သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေသများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Asian Harm Reduction Network (AHRN) သည် လောက်ကိုင်ဒေသရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၊ ၄င်းတို့၏လိင်ဆက်ဆံဖက်များ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်လူထုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးလုပ်ငန်းများ နှင့် ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ခြင်း၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှစတင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ ပဋိပက္ခရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည်မှာ ၁၃နှစ် တိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါ ဗီဒီယိုသည် ကျွန်တော်တို့ လောက်ကိုင် AHRN နားခိုရာသို့ လာရောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုရယူသူ တစ်ယောက်အား ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Funded by Access to Health Fund.